Ahoana ny fomba hivarotana ny làlana an-tserasera amin'ny lohahevitra iray tsy malaza (ari miteraka fifamoivoizana)
Nahoana ianao no te hanandrana ya hivarotra fampianarana an-tserasera amin’ny lohahevitra tsy fantaziya?
Fantatrao fa zavatra tsy dia malaza loatra hijerena ny sainan’ny mpihaino anao, indrindra raha mitaky ny hahatonga anao ho liana aloha, satria ny mpamaky anao sy ny mpizara dia mety tsy mahafantatra akory miso!
Saingy noho ny antony iray:
Izany dia satria rehefa mamoaka ny hafatrao ianao dia tsy mila vola fotsiny – te hitondra zava-baovao amin’ny niş ianao, avelao ny rivotra iainana vaovao, hahazo hevitra vaovao mivezivezy.
Ary tena tsara izany! Metyo ho toerana fivarotanao tokana, USP iray tokana mety hanova anao ho ilay nanoratra ilay boky, heç bilaogy na … nampamera anana.
Mila asa bebe kokoa izany, satria sarotra ny mandresy lahatra ny olona hanaraka na inona na inin amin’ny lohahevitra iray izay tsy fantaziya na tsy dia kely noho ny malaza, avelao izy hividy.
Saingy ho gaga ianao raha hianatra hoe fomba firy no hahazoana vola amin’ny fampianarana an-tserasera oyuncaq izany!
Misy ny paikady izay narahiko ary arahiko koa ary olona hafa koa no nanaraka. Amin’ity lahatsoratra ity, hitari-dalana anao aho avo eo mahaliana ao amin’ny lohahevitra tsy dia malaza na nyhe, manao vola ary mamokatra fifamoivoizana miaraka amin’ny lalanao an-tserasera.
Miomàna fotsiny mba hametrahana tongotra mavesatra.
0.1 Famintinana an’ity toro-lalana it (rohy haingana):
1 1. Manana sehatra iray, na fandaharam-pianarana efa misy
1.1 1. Ho an’ny mpamaham-bolongana
1.2 2. Ho an’ny mpanolotra
1.3 3. Ho an’ny mpanaraka ara-sosialy
1.4 4. Miaraka amin’ny mpianatra ankehitriny
2 2. Miteraha fahalianana amin’ny Anketler və Anket
3 3. Ampandrosoy ilə e-Kurs eo amin’ny sehatr’ao
3.1 5. Kurslar efa misy
4 4. Miezaha ho amin’ny lalao vaovao
4.1 1. Müsahibələr
4.2 2. Qonaq ismarıcları
4.3 3. Lahatsoratra fampahafantarana
4.4 Asehoy ny pejinanao ao amin’ny pejin’ny fivarotana.
5 6. Amidio ny fianarana manokana amin’ny vidiny ambany kokoa noho ny fandaharam-potoana ara-dalana na ny vokatra hafa
6 7. Manangòna ​​fijoroana vavolombelona
7 BONUS: Ataovy Atrik’asa Atao Amin’izay Ataovy Manam-pahaizana Hanatontosa Izany
8 Toolbar və İnternet
8.1 1. Apetraho miaraka ny kilasinao manokana
8.2 2. Manome azy io ho an’ny Pulsuz / Ödənişsiz hamono azy io
8.3 3. Canlı axın
9 Famoronana fifamoivoizana ho an’ny blôginao
10 Ümumiləşdirmək üçün
Famintinana an’ity toro-lalana it (rohy haingana):
1. Manana sehatra iray, na fandaharam-pianarana efa misy
Ny zava-misy dia hoe afaka mivarotra kongilika an-tserasera amin’ny lohahevitra iray tsy fanta-piavina ho an’ny mpihaino izay efa mahafantatra sy matoky azy ianao ianao.!
Mila izany fitokisana izani ianao hanomboka ity ezaka vaovao ity. Raha tsy misy izany drafitra izany, ny ezaka rehetra dia mety hiteraka fihenanam-potoana, ara loharanon-kery, na manolo-tena hisoratra anarana aza ianao.
Ny dingana voalohany hivarotana ny aterineto manokana dia ny manomboka amin’ny olona mahafantatra sy matoky anao – ireo mpanjifanao, mpibilaogy mpamaky bilaogy, ireo mpanara-dia ara-tsosaly (syra mitrara)..
Ireto misy torohevitra vitsivitsy anaba ny fomba handehanana amin’izany:
1. Ho an’ny mpamaham-bolongana
Mpamaky bilaogy dia mety hanome valinteny tsara ho an’ireo lahatsoratra bilaogy fampidirana.
Atombohy amin’ny lahatsoratra am-barotra indrindra anao ary ampio andalana miaraka amin’ny CTA momba ny hevitrao vaovao, tariho azy ireo ao amin’ny takelaka iray hanazava amin’ny an-tsipiriany ny hevitrao amy’yavanyonya amyanyanya amyanyanya amyanyanya amanyanya amyanyanya amya ny hafa.
Azonao atao mihitsy aza ny manamboatra sari na boky kely ary manolotra izany aminny pejy fandrahonana.
Azonao atao koa ny manoratra lahatsoratra bilaogy vaovao mampidirana ilay hevitra amin’ny vao vao, mampifandray azy amin’ny pejy mitongilana izay hanazavanao izay tianao hampianaranao ny mpamaky momba izyra va amaty amaty amaty amaty amaty amaty amaty amaty amaty amy amaty amaty amaty amaty amaty amaty amaty amaty amaty amaty amaty amaty amaty amaty amaty amaty amaty ama.
Ohatra, mano bilaogy ana və ya SEO, marketinq üzrə sərbəst yazı Yazı və daha çox ‘mampifandray’ ireo lohahevitra ireo amin’ny famahanana bilaogy toetra (niche kely fantatro). Mənimlə tanış olmaq, SEO, marketinq marketinqi fanatana mba hahalasa saina ny momba ny famoronana bilaogy.
2. Ho an’ny mpanolotra
Ireo rehetra izay miasa ho an’ny mpamaky dia manjary malaza ho an’ny mpamaky azy, satria izy ireo no loharano mendri-piderana, ireo olona izay liana indrindra amin’ny votoatinao, mihoatra noho ny mpamaky.
Azonao atao ny mampahafantatra azy ireo amin’ny alàlan’ny mailaka kely fantatrao miaraka amin’ny "PS" hər hansı bir amin’ny faran’ny mailakao vaovao, ya azonao atao ny mampahafantatra azy ireo amin’ilay lohahevitra miaraka andiam-pandefasana mailaka, amin’ny faran’ny hanaovanao hevitra, oyuncaq izany toy ny hoe: "Te hanao sonia ve ianao amin’ny alohan’ny vorona eo amin’ny (Mövzu adı)?"
Izany indrindra heç bir məlumat yoxdur.
3. Ho an’ny mpanaraka ara-sosialy
Manaraka anao ry zareo noho ny vaovao sy ny votoatiny, fa liana amin’ny hevitrao izy ireo, noho izany dia azonao atao tokoa ny mangataka fanehoan-kevitra amin’ny lahatsoratra vaovao na fivoriana mivantana amanaanaana amanaanaana amana.
Anontanio azy ireo momba ny fahalianan’izy ireo amin’ny nosy tsy tianao: sariaka ve izy ireo? Tiany ve ny votoaty maimaim-poana momba izany? Ahoana raha manolotra fitsarana maimaim-poana momba ny lalanao an-tserasera ianao mba hianatra bebe kokoa?
Afaka mamorona Q&Heç bir fandraisan’andraikitra azonao yoxdur.
4. Miaraka amin’ny mpianatra ankehitriny
Mpianatrao dia efa mahafantatra ny hasarobidinao sy ny fahaizanao mampianatra, mba hahafahan’izy ireo ho liana amin’ny hevitrao voalohany amin’ny dingana vaovao.
Ampio fehintsoratra ira na roa momba izany ao amin’ny qəzetiboky ny dingana efa misa anao, ya manome lesona fanampiny ho an’ny mpianatra izay hampidiranao ny lohahevitra s ny fampiharana sasantsasany.
Asongadino ny eleandraisana misy eo amin’ny lalana misy anao, hevitra vaovao ary ny modulları fianarana tianao hanorenana izany.
2. Miteraha fahalianana amin’ny Anketler və Anket
Azonao atao ny mangataka ny fanehoan-kevitra amin’ny endriny kokoa.
Asao ny sokajy tsirairay ahitana mpampiasa azo itokisana hita amin’ny teboka teo aloha mba handray anjara amin’ny fanadihadiana momba ning dingana vaovao.
No votoatiny azo atao tsara kokoa mba hahazoana valiny avy amin’ny mpitsidika habaka.
Mbola tsy fantaziya ny mpihaino kendrena anao na ho liana amin’ny zavatra atolotry ny làlanao fotsiny izy ireo, na raha toa ilay lohahevitra manjavozavo izay tsy fahita firy momba ny bilaogy ananana nyo dany sarob.
Mila mamantatra ny fahalianany ianao amin’ny fanadihadiana fohy sy tsy misy fika ar votoatin’ny vahaolana tsotra izay mifandray amin’ny votoatin-kevitra fampidirinao efa ao amin’ny tranokalanao, ary mety ho ho ea ea ea ho ea ea ho ea ea ho eak ea.
Azonao atao ihany koa ny manao fanadihadiana ampahibemaso na fandatsaham-bidy ho valin’ny lahatsary iray momba ny fampidiranao ny lohahevitra, mba hahafahanao maniry hanampy amin’ny alanlan’ny fanovozan-damba..
Ireto misy zavatra vitsivitsy angatahana amin’ny fanadihadiana mba hamaliana ny fahalianan’ny mpihaino anao:
Hanaraka ahy ve ianao aminity tetikasa vaovao ity?
Ahoana no tianao hianarana bebe kokoa momba it lohahevitra / fomba fanao / hevitra ity?
Te-hanana votoaty maimaim-poana ve ianao?
Tebii amin’ny fampianarana rehetra izay mampianatra anao ny fomba hampiharana azy io ve ianao?
Raha afaka mamorona tetikasa manodidina it hevitra ita ianao, heç bir meto ho izy? (It fanantaniana ity dia manampy amin’ny fandraisana anjara amin’ny fampiasana azo atao)
Hə, voka-pifidianana, soraty amin’ny:
1. Mamoròna lahatsary iray na manorata andininy fohy manazava fohifohy ny hevitrao, ary manontania fanontaniana momba izany. Ny fanontaniana diia tokony hanaraka mivantana avy amin’ny lahatsary na lahatsoratra ary mamorona eleanakalozan-dresaka voalohany amin’ny mpitsidika.
Ohatra: Manana Widget ny lapan’ny fitsapan-kevi-pifandraisana ao amin’ny tranokalan’ny bilaogera toetrako (cereo ny sary etsy ambony) manontany ireo mpitsidika hoe "Blogging Blog xarakteri üçün heç bir fanontaniana yoxdur? Avelao hazavaiko ny fisalasalanao ”. Ity fanontaniana tsotra ity dia manampy ahy hahazo valiny mahasoa ary mampiditra ireo mpitsidika tafiditra aminity vazaha fantaza-daza ity.
2. Ataovy izay hahamora ny fananganana ny fitsangatsanganana, satria tianao ny hilaza aminao ny tena tian’ireo olona ho fantatra momba it lohahevitra ity syy ny olana atrehiny, ny fisalasalany, ary ny fiheveranyana diso anan.
3. Ampandrosoy ilə e-Kurs eo amin’ny sehatr’ao
Mənim fikolokoloana dia tokony hokarakaraina am-pitandremana satria mampivoatra ny lohahevitra iaano na lohahevitra iray mety tsy haneno lakolosy eo noho eo amin’ny mpihaino anao, no izany dia mila mamota nemo mamotaka.
Ary tsy maintsy manao izany iano na amin’ny votoatin’ny fampiroboroboana və ya pejy fandrahonana.
5. Kurslar efa misy
Mamorona lesona iray na roa handrakonana lohahevitra fampidirana ho an’ny taranja vaovao. Azonao atao ny manampy ireo lahateny ireo ho toy ny mülayim fanampiny amin’ny fampianaranao amin’izao fotoşəkil izləmək üçün, hanoratra anarana ireo mpianatrao ho anao amin’ny alàlan’ny mini-fampidirana ho oyna mpihaza il.
Asongadino ireo tombontsoa azonao avy amin’ny fanatrehana ny dingana manaraka ny fianarana, ary ahoana no ahafahan’izy ireo mampiditra ny fianarany amin’izao fotoana izao.
4. Miezaha ho amin’ny lalao vaovao
Fantomanao misy anao dia fanombohana və ezaka fampiroboroboana anao.
Tsy maintsy mivoatra ianao raha te hanatratra mpihaino marobe, mahazo misoratra anarana ary mivarotra amidy bebe kokoa. Mila vongana firif ianao!
Nova vaovao mahafaly dia rehefa nanao asa tsara ianao tamin’ny fantsona efa misy, dia manangana manampahefana ianao, izay hanampy anao hanana safidy hafa mora kokoa.
Andao hojerentsika hoe iza amin’ireo azonao azonao averina faingana:
Azonao atao ny manadihady amin’ny fanampian’ny HARO, SourceBottle və MyBlogU. Azonao ampiasaina maimaim-poana ireo sehatra ireo.
Mamaly ny fanontanian’ny media momba ny lohahevitra sasany mifandraika amin’izany ary ampiasao ny fotoana hampidirana ilay hevitra vaovao. Ohatra, raha mitady hevitra momba ny famahanam-bolongana ny mpitoraka bilaogy iray, azoko atao ny milaza azy ireo momba ny tetikasan’ny bilaogin-draharaham-barotra amin’ny endriko sy ny lanalana ataoko hampanyanana fana fanyana amanya fanaanya fanaariya.
Tsy misy antoka tsy hampiasa ny hevitrao fa mila andramana foana!
2. Qonaq ismarıcları
Niy fandrakofana ny bolongana tratran’ny trafika dia mety hahaliana olona maro kokoa na farafaharatsiny mahaliana ny momba ny lalanao.
Mitadiava hər hansı bir anaty niş izay mifandray akaiky amin’ny anao na farafaharatsiny ao amin’ny nicheo ao amin’ny blôginao, amy amiasao ny hery mandresy lahatra amin’ny mailaka fanaraha-maso hametraka azy ireoo lahatra lavatrava.
Zava-dehibe bir fananana votoaty və lesona roa farafahakeliny na lesona maimaim-poana ho santionany ho an’ireo mpamaky bilaogy hakingana n hevitra momba ny atiny.
Raha toa ka misy backlinks hər hansı bir aminny blôginao na ny pejy momba ny fitsangatsanganana dia meto ho tafiditra ao anatin’ny sehatry ny bio, azonao atao ny mamorona fanentanana ao amin’ny lahatsoratra ary amampentanana amy amfifanana amy..
3. Lahatsoratra fampahafantarana
Heç bilaogy sasany dia mamela hafatra fampahafantarana raha ilaina amin’ny resaka. Azonao ampiasaina ihany koa ny vondrom-piarahamonina mifototra amin’ny votoaty oyuncaq ilə Linkedin Pulse, Kingged və Medine amin’ny Twitter.
Ireo dia toerana nahitana trangan-javatra goavana izay mety hahitana maso ny lahatsoratr’izy ireo, indrindra fa raha toa ka misy tambajotra nasionalin’ny varotra an-tserasera na ny fomba fiainan’ny aterineto..
Ny tara-pahazavana dia ho an’ireo izay maniry ny fomba fijery misimisy kokoa alohan’ny ahafahany manangona vola
Ny takelaka fahatelo dia ho an’ireo mila fampahalalana misimisy kokoa, ary mila hampiana atiny fanampiny ianao ho an’ny vondron’olona.
Asehoy ny pejinanao ao amin’ny pejin’ny fivarotana.
Melodiya Pourmoradi kimi bir fandraisana anjara marina amin’ny tetikasanao manokana, araka ny nolazain’i:
Mino tokoa aho fa ny fahagagana mba hahombiazako dia ny nizizako tamim-pitiavana it hafatra ity tamim-pahatokiana sy avy amin’ny toerana nifantoka tamin’ny fo marina. Rehefa mifanaraka amin’ny fijerinao tanteraka ianao dia tsy amidy akory – miresaka momba ny fizarana marina ny fandaharan’asa rehetra. Tsy afaka manampy ny olona fa mahasarika ny vokatrao rehefa mahatsapa angovo miaraka amini izy.
Izany heç bir antony tsy tokony hifantohan’ny mpivarotra fotsiny, fa amin’ny famoronana fifandraisana miaraka amin’ny saina sy ny famaliana ny fanontaniany araka izay azo atao.
Raha vantany vao tsapany fa mifanaraka tsara amin’ny fahitana anao izy ireo, dia gizitra ao amin’ny fianaranao izy ireo mba hianatra avy aminao, ny porofo manamarina fa tompon’andraikitra vao haingana nohonya tia nioia.
6. Amidio ny fianarana manokana amin’ny vidiny ambany kokoa noho ny fandaharam-potoana ara-dalana na ny vokatra hafa
Satria ity vaovao ity dia vaovao vaovao, bu olona dia mety tsy ho tia firy amin’ny fandaniana vola betsaka amin’izany na ny tahotra ho tratra, ya maro ireo safidy azonao dinihina:
Manolotra fanandramana 30 andro tsy misy atahorana amin’ny fizarana tsy mila carte de creddit
Ampiasao ny vidiny amin’ny vidiny kely ho an’ny volana voalohany 6 hatramin’ny herintaona amin’ny fanombohana
Manolora fihenam-bidy tsara (farafaharatsiny 15%) ho an’ireo izay manohy ny fianarana aorian’ny fandraisana andraikitra (tonga ho mpandray anjara, fanehoan-kevitra amin’ny lahatsoratra maromaro, sns).
Azonao atao koa ny mampifangaro ny zava-drehetra: Raha mivarotra tsy tapaka amin’ny $ 150 iaoo dia afaka mivarotra it amin’ny $ 70 $ a’y taona voalohany aorian’ny fanombohana. Nə azonao atao ny manao ny famoahana maimaim-poana ny volana 2-3 voalohany ary avo eo dia hampihatra ny vidiny manontolo, kanefa mety mbola te-hijanona amin’ny vidiny ambany noho ny fianarana tsy tapaka ianao.
Ireo endrika ireo dia hanampy ny hampidina ny ampingany anatiny ary handresy ny tsy fitokisana.
Azonao atao ny mampihatra ireo safidy ireo ho an’ny mpianatra marobe na amin’ny vondron’ny olona liana ary mangataka azy ireo hanampy anao amin’y fijoroana vavolombelona sy ny tranga tena izy.
7. Manangòna ​​fijoroana vavolombelona
Mangataha fijoroana vavolombelona feno amin’ny anarana, sary ary rohy, satria te hanorina fitokisana an’io porofo io ianao.
Raha manana ny vorona voalohany na ny fizarana maimaim-poana ny kitapom-bolanao ianao, dia mandriso sy manangona ny fijoroana vavolombelona avy amin’ireo mpianatra izay manandrana ny lalanao voalohany indrindra: ityana ama hanadamyadia ana ny varotra ireo lahatsoratra amin’ny blôginao ny votoaty maimaim-poana ampiasainao mba hivarotana.
Mitandrema porofo maro araka iz tratranao fa ny foto-piainana fantatrao sy ny fampianarana ataonao.!
BONUS: Ataovy Atrik’asa Atao Amin’izay Ataovy Manam-pahaizana Hanatontosa Izany
Satria hevitra vaovao izany, ny olona dia mety tsy hamidy amin’ny teny sy ny fanadihadiana: Mety te-hanandrana ny zava-drehetra izy ireo hijerena raha miasa izy ireo!
Ney atrikasa dia somary lava kokoa noho ny mandeha an-tserasera tsy tapaka, ary ny olona dia afaka mametraka avy hatrany ny zavatra nianarany. Ao amin’ny lahatsorany momba ny fomba Manangona ny tranokalanao amin’ny famanonana atrikasa amin’y aterineto voalohany, Manazava i Lori Soard’a nya olona ny zavatra ianarany, rehefa manona ny mpihainaana mata amina dia hahazo sitraka aminao amin’ny zavatra mety ho azon’izy ireo ampiasaina!
Safidy tsara hanolotra ilay fitaovana ho fampianarana amin’ny fandefasana voalohany izany. Azonao atao ny manarina ny atrikasa ho amin’ny làlan’asa mahazatra feno izay misy koa atrikasa, fa ny fiantohana atrikasa dia mety hahomby kokoa.
Ataovy it atrikasa iray herinandro ity izay mampianatra ny olona amin’ny ohatra. Aha, niy atrikasa iasako eo dia ny fampianarana ny olona ny fomba hananganana bilaogy mpandray anjara ary ny famolavolana ny lahatsoratra amin’ny bilaogin’ny olona iray.
Toolbar və İnternet
Vantany vao azonao ny drafitra natokana ho an’ny taranja manokana dia fotoana izao hamoronana ireo mavitrika fianarana ary hikaroka ireo sehatra ahafahana mizara izany amin’ny mpianatrao..
1. Apetraho miaraka ny kilasinao manokana
Makà sombin-taratasy iray na alao ny fitaovana fanoratana nomerika anao ary manomboka mametaka ny fomba tianao hanolorana ny fitaovana amin’ny mpianatrao.
Te-hanomboka amin’ny aylıq amin’y tanana iao, heverinao fa ny teoria aloha dia tokony handeha aloha?
Sual və suallarınızı cavablandırın?
Hər hansı bir amin’ny faran’ny lozam-pifamoivoizana na amin’ny tapany afovoan-dalana ary amin’ny farany?
Manontania tena amin’ny tenanao izay manampy anao hamorona rafitra voafaritra tsara ho an’ilay fianarana.
Ny dingana manaraka dia ny manoratra ny module mandeha ary mandamina azy ireo araka ny drafitra. Azonao atao ny mamela an’i Lori Soard hitarika anao amin’ny alalan’ny Ny fototry ny lalana an-tserasera nosoratana tamin’ny dingana 12.
2. Manome azy io ho an’ny Pulsuz / Ödənişsiz hamono azy io
Azonao atao ny mamolavola ny onjam-peo an-tserasera na mampiantrano azy amin’ny sehatra manokana.
Ao amin’ny lahatsoratra nosoratako teo aloha, Lori dia manolotra sehatra 4 hamiləlik və lalanao: Udemy, Moodle, Tədris edilə bilən WizIQ.
Ireo sehatra ireo dia lehibe intuitiv amin’ny fampiasana, La hanombohana ilə mba jereo ny lahatsoratr’i.
Eto aha hanampy Google Sinif otağı, Google’un əhvalına görə mamorona efitrano virtoaly malalaka. Azonao atao ny mampakatra andraikitra, horonan-tsary, fitaovana fianarana ary mametraka fanontaniana amin’ny mpianatra. Google’dan istifadə etmək üçün Google’dan hananganana sehatra fianarana ho an’ny fahalalahana.
Miaraka amin’i Moodle, misia sombin-tsary roa hafa ahafahana mampiantrano ny lalanao:
LearnPress – Plugin WordPress it it mba hamadika və fametrahana anao ho oyuncaq və sehit e-fianarana. Azonao atao ny mamorona lozisialy avy amin’ny tontolon’ny WordPress. Izy io dia miaraka amin’ny adiresy maimaimpoana maimaim-poana sy avo lenta mba hanitarana ireo fonctionnaire, oyuncaq ny fizarana fitsipika sy lahatsora-peo.
Claroline – Sehatra iray mora azon’ny mpampiasa sy mahay intuitiv hametraka sy hampandehanana ao amin’ny tranonkalanao ho an’ny fianaranao. Efa an-taonako ity heç bir nampiasaiko hanoherana ny maodely fianarana ny tenako ho an’ny tanjoko fianarako mandritra ny androm-piainako ary miasa oyuncaq və mahafatifaty izy io. He an’ny fizarana tsirairay noforoninao ao amin’ny lampihazo dia manana endrika maro misy ianao: forum, söhbət, viktorina, tanjona fianarana ary rafi-pifandraisana anatiny.
3. Canlı axın
Facebook Live dia manome anao ny safidy hanangana sehatra mivantana mivantana izay azonao ampiasaina amin’ny mpianatrao ao amin’ny vondrona izay noforonina ho an’ny lalao na eo amin’ny peehy mandeha..
Nə izani aza, tsy io ihany heç bir etibarlı tsy maintsy ampidirinao mivantana amin’ny fanomezana ny làlanao:
YouTube mivantana – YouTube (amin’ny Google) üçün xoşagəlməz nəticələr verir. Mandehana ao amin’ny https://www.youtube.com/live_dashboard hanombohana mivantana mivantana. Bu sessiya və ya amin’ny kaontinao.
Google Hangouts – Azonao atao ny manangana ireo lahatsary isan-kerinandro na isam-bolana amin’ny mpianatrao mampiasa io fitaovana malaza Google. Ireo seho mivantana dia voakakitra aro voatahiry ao amin’ny kaontinao YouTube.
Vimeo Live – Manomboka $ 65 / volana və ya 10 mivantana, horonan-tsary, famaha avo (1080p), ailəyə və ailəyə kömək edəcək.
Amin’ny alalan’ny horonan-tsary mivantana dia omenao ny sasantsasany amin’ireo tombontsoa amin’ny endrika mifanatrika n tontolo iainana fianarana, izay afaka manome fanatsarana fanampiny ho an’ny mpianatrao..
Famoronana fifamoivoizana ho an’ny blôginao
Nan fandehanao an-tserasera dia mitazona ny olona tafiditra amin’ny lohahevitra tokana mandritra ny herinandro na volana vitsivitsy, fa ahoana kosa ny momba ny blôginao.?
Azo inoana fa, nanoratra farafahakeliny fotoana vitsivitsy momba it lohahevitra tsy malaza ity iao, fa ny fahatratraranao dia tsy nahazo ny sainao nantenain’ny olonao.
Azonao atao izao ny mampiasa ny lalanao an-tserasera mba hitondra fiara fitaterana bebe kokoa amin’ireo lahatsoratra bilaogy (s amin’ny blôginao manontolo):
Ampidiro ao amin’ny blaoginao ny hafatrao na vakinao ho an’ny mpianatrao: İzany dia hanery ny mpianatrao hiverina tsy tapaka amin’ny bilaoginao hamaky ireo lahatsoratra, ar afaka manampy amin’ny fomba stratejika ianao hanatsarana ny fahalianana amin’ny votoatin’ny bilaoginao sana niyo ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama amira toa ka maniry ny hahafantaran’ireo namany ny zavatra ampianariny)
Mamorona fanadinana fidirana ho an’ireo izay te hisoratra anarana izay takiana mba handinihana lahatsoratra bilaogy ao amin’ny blôginao
Ampiasao ny bilaogy hanambara fankalazana sy fihenam-bidy bebe kokoa
Toxizo ny varavarana "maimaim-poana" manokatra ny lalanao ary ambarao azy matetika ao amin’ny blôginao
Ney asa rehetra syy fananganana rohy rehetra Nataonao mba hampiroboroboana ny fampiasana və aterineto efa nahatonga tranga maromaro ho an’ny pejy manokana ao amin’ny blôginao s ny tranonao – aza meno izany!
Ny maha-tany am-boalohany dia mety mitaky asa bebe kokoa noho ny fandehanana miaraka amin’ny lohahevitra malaza, ary mety tsy mila miantehitra loatra amin’ny teny fanalahidy orqanik ianao raha toa ka tsy misyana fanaata fanaata fanaata fanaata fanaata fanaata fanaat fanahana frana Vaovao na tsy fantatra akory, fa tsy fanentanana ho an’ny mahery fo izany. azo tanterahina tanteraka.
Ampiasao ireo mpamaky anao, ireo mpanjifanao, ireo mpanara-dia ara-sosialy ary ireo tranonkala fitantanana mavitrika mba hanampy amin’ny fampielezana ny teny sy ny fanentanana sy ny fahalianana aminya ama ama ama ama amria amera amina amria amria.
Avelao ny olona hanome azy io ezaka maimaim-poana, avelao izy ireo hanandrana ny zavatra tsy fantatrao. Metyu ho fantatra rahampitso izani.
Raha mbola mino ny tetikasanao sy ny zavatra tianao hampianaranao ianao, dia afaka mahita fahombiazana na inona na inona ireo mpitory tsy mienta.
Nahoana ianao no te-hanandrana sy hivarotra fampianarana an-tserasera amin’ny lohahevitra tsy fantatra? Fantatrao fa